अपील: तपाईंको सहयोगले उमाकान्त बचाउन सकिन्छ, हृदय देखी नै सहयोग गरौँ ! – ebaglung.com
२०७४ माघ ९, मंगलवार ०८:१४	Top News, अन्य समाचार
शान्त खत्री मौसम , गल्कोट २०७४ माघ ९ । बागलुङ ताराखोला गाउँपालिका वडा न ।३ कांक्राखोरका कृष्ण प्रसाद निउरेका छोरा उमाकान्त निउरे गत पुस महिनाको १५ गते भीरबाट लडी दुर्घटनामा परेका छन । उनलाई १६ गते बिहानै पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई अहिलेसम्म पनि आईसयुमा राखी उपचार गराईराखेको उनका दाजु रेशमलाल निउरेले बताए । भाईलाई उपचार गराउन लिएको २५ दिन पुग्न लाईसक्दा पनि स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएको छैन , उपचारमा संलग्न डाक्टर भरत खत्रीले अझै महिनौ सम्म अस्पतालमै राखियो भने मात्रै बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार हुने बताउछन । तपाईंहरुको सानो सहयोगले मेरो भाईलाई बचाउन सकिन्छ , दु:खपर्दा त हो हेर्ने रेमलालले भन्छन। उपचारका क्रममा हाल सम्म धेरै रकम खर्च भई सकेको र अझै महिनौं समय राख्दा धेरै खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छ्न ।
पारिवारिक स्रोतले जनाए अनुसार निउरेको उपचारमा दैनिक २५/३० हजार खर्च भैरहेको बुझिएको छ । उनको उपचार लाई सहयोग पुराउन उमाकान्त बचाउ अभियान पनि सुरु गरिएको छ । काठमाडौ पनि डिल बहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्य समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा गणेश चालिसे ,कृष्ण साहानी , मेघ थापा ,नारायण घिमिरे र आरपी निउरे रहेका छन् । त्यस्तै बिरामीका दाजु रेमलाला निउरेको फोन न 9869539544, जापानमा सम्पर्क समिर निउरे फोन न. 09066091507 काठमाडौ लागि आरपी निउरे फोन न 9851278228 र नारायण घिमिरे फोन न 9843921719 गलकोटको लागी मन्दिप निउरे फोन न 9867699737 र शान्त खत्री मौसम फोन न 9863815236 संगै सामाजिक संजालमा पनि उल्लेखित नाममा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
उमाकान्त बचाउ अभियानमा विभिन्न संघसंस्थाले पनि हातेमालो गरिरहेका छन निउरेले हरि माध्यमिक बिद्यालय कक्षा १२ मा अध्ययन गर्थे । उमाकान्त बचाउ अभियान लाई हामीले तिव्रता दिरहेका छौ । संगै हरेक क्षेत्रमा सहयोग अपिल पनि गरिरहेका छौ बचाउ अभियानका एक सदस्य आरपी निउरेले भने । तपाईको सानो सहयोगले पनि निउरेको ज्यान बचाउन सकिन्छ । हृदय देखी नै सहयोग गरौ ।